Wasiir Bayle”IMF way ku qanacday dhamaan sidii aan uga soo baxnay shuruudihii SMP3″ – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Wasiir Bayle”IMF way ku qanacday dhamaan sidii aan uga soo baxnay shuruudihii...
Beegsonews:–Wasiirka Maaliyadda Xukuumaadda Federaalka Soomaaliya Mudane Cabdiraxmaan Ducaale Bayle ayaa maalintii labaad Magaalada Adis Ababa kaga qeyb-galay Shir Looga hadlayo Horumarinta Dhaqaalaha Soomaaliya iyo dhameystirka hanaanka deyn cafinta Soomaaliya.
“Waxaa maalinkii 2aad inoo socda shirka dib u eegista Barnaamijka sadexaad ee Deyn Cafinta Soomaaliya (SMP3) ee aan la leenahay Hey’adda lacagta aduunka ee IMF”.ayuu yiri Wasiir Bayle.
Wasiirka Maaliyadda Soomaaliya ayaa sheegay in hay’adda lacagta Adduunka ee IMF ay ku qanacday dhamaan sidii Dowladda ay uga soo baxday shuruudihii SMP3, isagoo rajeeyay in uu guul ku soo dhamaado shirkaasi maalintii labaad ka socda Magaalada Adis Ababa.
Previous articleBaarlamaanka Ingiriiska Oo Su’aalo Ku Saabsan Doorashada Wakiilada Iyo Xaaladda Xuquuqal Insaanka Somaliland Weydiiyay Wasiirul Dawlahooda Khaarajiga
Next articleDoorashada 3 kursi oo ka bannaan golaha shacabka oo maanta ka dhacaysa Baydhabo
Iran maxay ka dheefaysaa haddii ay weerar ku qaaddo Sucuudiga?
Cun khudaar maalin kasta si aad uga hortid cudurka macaanka iyo...